Umzimveliso we-SFP + eDuplex | Abavelisi base China SFP + Duplex, abaXhasi
I-10Gb / s SFP + SR 850nm 300m DDM VCSEL LC i-transceiver ebonakalayo
I-10Gb / s SFP + SR yenzelwe ukusetyenziswa kwiikhonkco ze-10-Gigabit Ethernet ngaphezulu kwefayibha ye-multimode. Ziyathobelana ne-SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3ae 10GBASE-SR / SW kunye ne-10G Fibre Channel 1200-Mx-SN-I. Imisebenzi yokuqonda isifo yedijithali iyafumaneka ngocingo lwe-2-wire serial interface, njengoko kuchaziwe kwi-SFF-8472.
10Gb / s SFP + LR 1310nm 20km DDM DFB LC I-Duplex i-transceiver ebonakalayo
I-10Gb / s ephuculweyo yeNcinci yeFom factor Factable Plugable SFP + transceivers yenzelwe ukusetyenziswa kwiikhonkco ze-10-Gigabit Ethernet ukuya kuthi ga kwi-20km ngaphezulu kwendlela enye. Ziyathobelana ne-SFF-8431, SFF-8432 kunye ne-IEEE 802.3ae 10GBASE-LR / LW, kunye ne-10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L imisebenzi yokuqonda yedijithali iyafumaneka nge-2-wire serial interface. Ii-transceivers ezibonakalayo ziyahambelana nemfuno yeRoHS.
10Gb / s SFP + 1310nm 40km DDM DFB LC Duplex transceiver ebonakalayo
I-10Gb / s ii-transceivers ze-SFP + ezinokucwangciswa ziPhuculweyo zeFom yefowuni enokucwangciswa kwe-SFP + i-transceivers eyilelwe ukusetyenziswa kwi-10-Gigabit yamanqanaba amanqanaba amanqanaba ukuya kuthi ga kwi-40km yeG. Ziyahambelana ne-SFF-8431 1, SFF-8432 2 kunye ne-10GBASE- ER / EW; Inkxaso ye-4x, i-8x kunye ne-10x Fibre Channel, kunye ne-CPRI 2 ukuya kwi-8, ngaphezulu kweekhonkco ezingama-40km.
Imisebenzi yokuqonda isifo yedijithali iyafumaneka ngocingo olubonakalayo olunentambo ezimbini, njengoko kuchaziwe kwi-SFF-8472. Ii-transceivers ezibonakalayo ziyahambelana nemfuno yeRoHS.
10Gb / s SFP + 1550nm 40km DDM EML LC Duplex transceiver ebonakalayo
10Gb / s SFP + ZR 1550nm 80km DDM EML LC I-Duplex i-transceiver ebonakalayo
I-10Gb / s ii-transceivers ze-SFP + ze-ZR eziPhuculweyo ziyaphuculwa ziFomathi eziNcinci ezinokukhutshelwa ze-SFP + ze-transceivers eziyilelwe ukusetyenziswa kwi-10GBASE-ZR / ZW ukuya kuthi ga kwi-80km ye-G652 yendlela enye. Ziyathobelana ne-SFF-8472 kunye ne-SFP + MSA, SFF-8431 kunye ne-SFF-8432, IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR / ZW, FCC 47 CFR Icandelo 15, iCandelo B kunye neTelcordia GR-468-CORE.